3 March 2015 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၂
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်
ရန်ကုန် ပြဇာတ်အသင်းအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ အဖေ့ဘောင်းဘီတို ကျေးဇူးကိုလည်း မေ့လျော့လို့ မဖြစ်ပြန်ချေဘူး။
ကျွန်တော့်အဖေက ဘားမာနေဗှီလို့ အဲဒီ့အချိန်က ခေါ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရေတပ်မှာ တပ်သားအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ဖူးတယ်။
သရက်မြို့သားအဖေနဲ့ မန္တလေးသူအမေတို့ ရေစက်ဆုံတာ အဲဒါကြောင့်လို့လည်း ဆိုရမယ်။
အဖေ တာဝန်ကျတဲ့ သင်္ဘောက မြန်မာ့ရေတပ်ရဲ့ ပထမဆုံး အလံတင်သင်္ဘော မေယု (UBS May Yu) စစ်သင်္ဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သည်နေရာမှာ မြန်မာ့ရေတပ်ပေါ်ပေါက်လာပုံကို သိထားဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်။
အကြီးကြီးတွေ လျှောက်ပြောချင်ရင်တော့ ဗမာ့ရေတပ်ဟာ ၁၅ ရာစုကတည်းက စတင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလို့ ၀ါလို့ ရပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ့ရေတပ်ဟာ ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာသာ တွင်ကျယ်ခဲ့တဲ့၊ လှေတစ်စီးပေါ်မှာမှ လှေသား ၃၀ လောက်သာ ပါတဲ့၊ ၁၈ ရာစုလောက် ရောက်တော့မှ ၆ ကနေ ၁၂ ပေါင်ဒါ (၆ ပေါင်မှသည် ၁၂ ပေါင်လေးတဲ့ သံတုံးကြီးတွေကို ပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်း)ရှိတဲ့ အမြောက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရှင်ဘုရင့် ရေတပ်ပါ။
အဲဒါတွေက ကိုလိုနီလက်အောက်ခံဘ၀ကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ အပြီးတိုင် ချုပ်ငြိမ်း သွားခဲ့ပါတယ်။
တကယ့် ဘားမားနေဗှီရဲ့ ကလလရေကြည်က ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်မှာ သန္ဓေတည်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်က အုပ်ချုပ်နေသူ ဗြိတိသျှတို့က ဘားမားနေဗှီကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ မဟာမိတ်တပ်များနဲ့အတူ ဂျပန်ကို တိုက်ဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့ကမှ လွတ်လပ်ရေး ရခါနီး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ တပ်သား အင်အား ၇၀၀ နဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှတွေကပဲ ဖွဲ့စည်းပေးတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ရေတပ်အတွက် သင်္ဘောတွေကိုလည်း ဗြိတိသျှ တော်ဝင်ရေတပ်က သင်္ဘောတချို့ကို လက်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။
အတိအလင်း ပြောရရင်တော့ ဘားမားနေဗှီဟာ ဗြိတိသျှစနစ်သက်သက်ကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်းတပ်နဲ့ မတူပါဘူး။
ကြည်းတပ်က ရဲဘော်သုံးကျိပ်က စတာပါ။ အဲဒီ့အချိန်က စစ်သွေးကြွ ဂျပန်စနစ်က ဆင်းသက်တာပါ။ တချို့က ငြင်းချင်ကြတယ်၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ် ကန္ဒီစာချုပ်အရ ဗြိတိသျှ လက်အောက်ခံ ဗမာ့တပ်ရင်းနဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့တာမို့ ဂျပန်စနစ်ကို နို့သက် မခံပါဘူး၊ ဘာညာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း တင်မောင် (မြတ်ထန်) အပါအ၀င် ရှေးတပ်မှူးဟောင်းကြီးတွေရဲ့ မှတ်တမ်းများအရ မြန်မာ့ကြည်းတပ်ဟာ ဂျပန်စနစ်ကိုသာ အမွေခံကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတာ လယ်ပြင်မှာ ဧရာမ လယ်ထွန်စက် နီနီရဲရဲကြီး တလိမ့်လိမ့် သွားနေသလို ထင်ရှားပါတယ်။
ဗြိတိသျှ အငွေ့အသက်တွေ အပြည့်ရှိနေသေးချိန်မှာ ကျွန်တော့်အဖေက အဲဒီ့ ဘားမားနေဗှီမှာ အမှုထမ်းခဲ့တာပါ။ ၁၉၅၀ ပြည့်ကျော်စ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (အဖေ့ ရေတပ် ၀တ်စုံနဲ့ မေယုသင်္ဘောပေါ်က ပုံတွေကတော့ အမေ့လက်ချက်နဲ့ တစ်ပုံမှ မကျန်ရှာတော့ပါဘူး။)
သူတို့ဖူးစာ ကျွန်တော့် ကြမ္မာ
ဘားမားနေဗှီရဲ့ ပထမဆုံး စစ်သင်္ဘောကြီး မေယုကို ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် လည်ကြွားတော့ မန္တလေး ဂေါဝိန်ဆိပ်ကို ရောက်ပါတယ်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်လောက် ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ (အမေ့ကို သေချာ မမေးလိုက်မိဘူး။)
အမေက အဲဒီ့အချိန်မှာ မန္တလေး စိန့်ဂျိုးဇက်(ဖှ်) ခန်ဗှယ့်(န်)(ထ်)က ကျောင်းဆရာမ။ သူ့တပည့်တွေနဲ့ မေယုစစ်သင်္ဘောကြီးကို သွားရောက် ရင်သပ်ရှုမောကြ။ သင်္ဘောသားလေး (ကုလားဆင်) အဖေနဲ့ စက္ခုရူပေန သံဝါသ။ အမေ့ဘ၀ ကံဆိုး မိုးမှောင်ကျခြင်းရဲ့ အစ။
အဖေနဲ့ တပ်၊ တပ်နဲ့ အဖေ
အဖေက တကယ်တော့ တိုင်းပြည်ချစ်လို့၊ အသည်းကောင်းလို့ တပ်ထဲ ၀င်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တိုင်းပြည်ချစ်၊ အသည်းကောင်းရင်လည်း ရေတပ်ထက် ကြည်းတပ်ကို ပိုမက်မှာပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်ဘူးလား။
ရေတပ်ကို ၀င်တာက ကြည်းတပ်ထက်စာရင် သေကိန်းနည်းမယ်လို့ တွက်ခဲ့ပုံ ရပါတယ်။
အဖေ့မှာ သူ့ဘ၀အတွက် လောက်လောက်လားလား အားကိုးစရာ မရှိပါဘူး။ သူ့အဖေက ကိုလိုနီ လက်ထက်တုန်းက ပုလိပ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် မိသားစုကို ထောက်ပံ့နိုင်ပုံ မရဘူး။ အိမ်ထောင်ကလည်း နှစ်အိမ်ထောင်နဲ့။ အဖေက ပထမအိမ်ထောင်က မွေးတာ။ အဖေ့အမေကလည်း ဘာအလုပ်မှ လုပ်ပုံမရဘူး။
ကျွန်တော့်မှာ ထင်ကြေးတွေ လျှောက်ရေးနေရသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဖေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် ဘာမှ ကောင်းကောင်းကန်းကန်း တိတိကျကျ မသိလို့ပါပဲ။ အဖေက သူ့ဇာတ်ကြောင်းကို ပြန်ပြောင်း ပြောချင်စိတ် ရှိကောင်း ရှိနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဖေနဲ့ ကျွန်တော့် ဆက်ဆံရေးက မနွေးထွေးခဲ့တာမို့ ဖအေရယ် သားရယ်ဆိုပြီး ကြည်နူး ပြောဆိုရချိန် မရှိသလောက် ပါးရှားခဲ့ပေတာကိုး။
အဲတော့ အဖေဟာ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ခုနစ်တန်းလောက်မှာ ရန်ကုန်မြို့ကို တက်လာ၊ ဆွေနီးမျိုးစပ်ဆီမှာ ကပ်နေ၊ ကြုံရာကျပန်း လုပ်ရင်းက သူ့အတွက် အနေအစားချောင်မယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ရေတပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် နားလည်ထားပါတယ်။ အဖေ့ စိတ်ဓာတ်ကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းကြီး သိတဲ့အတွက် သည်လို ရဲရဲကြီး ရေးလိုက်တာပါ။
အဖေ့အတွက် အဲဒီ့အရွယ်မှာ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့က ပဓာန ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်တွေ၊ ဇာတိမာန်တွေ အတွက် သူ့ခမျာ အချိန်ပေးနိုင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထမင်းတောင် နပ်မမှန်နိုင်တဲ့ ဘ၀မှာ ဇာတိမာန်ကလည်း ထမင်းဝစေမှာမှ မဟုတ်တာပဲလေ။
အဲ… အမေနဲ့ တွေ့တော့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ သော့တွဲနဲ့ နတ်ရုပ် ဇာတ်လမ်းအတိုင်း ဖြစ်ကုန်သလား မသိပါဘူး။
အမေ အပျိုပေါက်မှာ သူ့ထက် အသက်များစွာကြီးပြီး နှစ်ဖက်အမျိုးစပ်ရင် ပတ်သက်တဲ့ ဆွေနီးမျိုးစပ် တယောက်နဲ့ ငြိတယ်။
အဲသလို ငြိမှန်းလည်း သိကြရော တစ်မျိုးလုံး တစ်ဆွေလုံးက ဓားကြိမ်းကြိမ်းတယ်။ အမေ့ကို ၀ိုင်းနှိပ်စက်ကြတယ်။ ထမင်းစားခန်းထဲ အမေထိုင်နေရင်တောင် အပျင်းပြေ ကန်သွားတဲ့သူနဲ့၊ အလကား သက်သက်မဲ့ နားရင်းအုပ်သွားတဲ့သူနဲ့။ အစ်ကိုနဲ့ ဘထွေးတွေက ၀ိုင်းဘေနေကြတာ။
ဒဏ် မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံး အဲဒီ့လူနောက် အမေက လိုက်ပြေးခဲ့တယ်။
Mung Shadan ဆြာရေ ဒီလောက်အလုပ်များတဲ့ ကြားကဒီလို အနှစ်တွေရေးဖို့ အချိန်ဘယ်လိုများ စီမံယူနိုင်တာလဲဗျ။ အမှတ်မထင် ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ခုတော့တမေ့တမော ဆန့်တငင်ငင် စောင့်ဖတ်နေရပြီ။
Htar Htar Myint ဆရာကြီးကလည်း တထောင့်တညပုံပြင်ဇတ်လမ်းဖြစ်လာနေပြီ
ATK ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါ။ ရေးရင်းနဲ့ စိတ်ကူး ပြောင်းသွားလို့ပါ။ အစကတော့ အမှတ်တရလေး အဖြစ် ရေးမလို့ပဲ။ ရေးရင်းနဲ့ ကိုယ်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ ပုံစံဘက်ကို မသိမသာ ၀င်သွားတာလေး သတိထားမိလာတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသက်ရှည်ရှည် နေရမယ်လို့လည်း သိပ်မှန်းမထားမိတော့ အဲဒါလေးကို ရှင်နေတုန်း၊ ရေးနိုင်တုန်းလေး ရေးသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးနေတာ နည်းနည်းတောင် ကြာနေပြီ။ ဘယ်က စရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ။
အခု ဒါကို ရေးရင်းနဲ့ လက်တွေ့လာတယ်။ သည်ပုံစံနဲ့ ရေးတာက နည်းနည်း ပိုပေါ့ပါးနေတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မူလရည်ရွယ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ အားပါးတရ ချော်ထွက်သွားပြီး အဲဒီ့ဘက်ကို ရောက်သွားတာပါ။
ပြောပါပကော… သူများက လက်သင်စာရေးသူလေးပါလို့။ ဂလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့နော်
Khin Myo ဘာပဲပြောပြောဖတ်ရင်း စောင့်ရင်း စောင့်နေရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ပါပဲ မဖတ်ပဲမှမနေနိုင်ပဲနော့
Thet Chow ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဦးအံ့ကြီးအကြောင်းကော အဆုံးသတ်ပလား။
ATK အဲဒါက တစ်ချိန်ချိန်တော့ အဆုံးသတ်မှာပါ။ အခုထက်ထိတော့ အဲဒီ့အကြောင်း အဆုံးသတ်ဖို့ စိတ်ကူး မရှိသေးဘူးခည 🙂
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်
လိုက်သာ ပြေးတာ၊ သိပ်ကြာကြာတော့ မပေါင်းလိုက်ရဘူး။ စရိုက်ချင်းက မတူ၊ သူ့အိမ်မှာ မင်းသမီးတစ်ပါးလို နေခဲ့ရတဲ့ အမေဟာ ယောက္ခမအိမ်မှာ အစေခံတစ်ယောက်လို မနေနိုင်၊ သူ့ကို ဖျားယောင်းပေါင်းသင်းခဲ့သူကလည်း မေတ္တာရှိလို့ မဟုတ်ဘဲ သွေးသားဆန္ဒ ဖြေရုံသက်သက်သာမို့ နောက်ဆုံးမှာ အမေလည်း မိဘအိမ် ပြန်ရောက်ခဲ့တာပေါ့။
ခေတ်ကို ပြန်တွက်ကြည့်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ခုနစ်ဆယ်ကျော် ရှစ်ဆယ်နီးပါး။ အသိုင်းအ၀ိုင်းက မန္တလေး။ ခေတ်အမြင် ခေတ်အတွေးနဲ့ ဝေးစွ ခြောက်ပါး။
နှစ်ပေါင်း ၇၀၊ ၈၀ အသာထားဦး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်မှာတောင် ဂေါဝိန်ဆိပ်အနီး ပိုက်ကျုံးရပ်မှာ ကျွန်တော် ကားတိုက်တာကို ၈၁ လမ်းနဲ့ ၁၉ လမ်းထောင့်နားလောက်ဆီမှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်က လူတွေ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်မရောက်ခင် သိနှင့်နေပြီးဖြစ်တဲ့ ရွာဓလေ့နဲ့ ရွှေမြို့တော်ကြီး။ အဲဒီ့ခေတ်က ပါလေရာဖုန်း ဝေးစွ၊ ကြိုးဖုန်းတောင် မန်းရွှေမြို့မှာ လောက်လောက်လားလား ရှိသေးတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကားတိုက်တဲ့ နေရာနဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့က မရှိဘူးဆို သုံးမိုင်လောက်တော့ ဝေးသေးတာ။ ကျွန်တော်ကသာ မသိတာ၊ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူ၊ ဘယ်အရပ်ကမှန်း တန်းသိနေတဲ့သူတွေက ရွှေမြို့တော် လေးပြင် လေးရပ်မှာ တစ်ပြုံနဲ့မှ တစ်မကြီးရယ်။
တစ်ခုခုဆို သူတို့တွေက ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား၊ နေပူနေရင် ထီးဆောင်း၊ ဖိနပ်အပါးခံပြီးကို တကူးတက သတင်းပေးခဲ့ကြတာကလား။ ချစ်စရာ ရွာဓလေ့ပေပ။
အဲသလို ရွာစရိုက်နဲ့ဆိုတော့ လင်နောက်လိုက်ပြေးဖူးတဲ့ အမေ့ခမျာ လူသာ ဆက်လုပ်နေရတာ၊ တကယ့်တကယ်က စိတ်မလုံခြုံနိုင်တော့ဘူး။
မန်းရွှေမြို့မှာလည်း သူ့ကို တကယ် တည်တည်တံ့တံ့ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုတဲ့ သူကောင့်သားက ပါးရှားသွားပြီ။ မြို့က အဆိုတော်တစ်ယောက်ကတော့ အမေ့ကို စွဲစွဲလန်းလန်းနဲ့ မြို့မဆရာငြိမ်းကို သီချင်းတစ်ပုဒ် ရေးခိုင်းပြီး ဆိုခဲ့သေး ဆိုပဲ။ ဘယ်သူဆိုတာ ပေါ်သွားမှာစိုးလို့ ကာယကံရှင်ကို အားနာသောအားဖြင့် ဘာသီချင်းဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူးနော်။ သီချင်းက နောက်ပိုင်းမှာ လူသိများတဲ့ သီချင်းပါပဲ။ ၀င်းဦးတောင် ဆိုသွားဖူးသေးတယ်။
သို့သော် တကယ်တမ်းမှာ အမေက တစ်မြို့တည်းသားတွေကို မယုံရဲဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့။
သည်အခြေအနေမှာ အဖေကလည်း ကြောင်ခံတွင်းပျက်။ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း တိုင်းပြည်ချစ်လို့၊ သွေးကောင်းလို့ ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ ရေတပ်ထဲ ၀င်ခဲ့တဲ့သူမှ မဟုတ်တာ။ အနေအစားချောင်မယ် အမှတ်နဲ့ ၀င်လိုက်တာ။
အမေ့ကိုလည်း မျက်စိကျသွား။ အမေကလည်း စိတ်ညွတ်နေတာနဲ့ အဖေက အမေ့ကို သွားတောင်းတော့တာပေါ့။ အဲတော့ အဘွားက ပြောလွှတ်တယ်။ ရေတပ်က ထွက်ဖို့။ သူ့သမီးကို တပ်ထဲကလူနဲ့ မပေးစားနိုင်ဘူး၊ ဘာ ညာ။
ကျွန်တော့်အဖေ (လောင်းလျာ) ဖိုးကျိုင်းတုတ်လဲ တပ်က ထွက်တော့တာပေါ့။ စိတ်ဓာတ်က အဲလို ပြင်းတာ။ (ကျွန်တော့် အတိုင်းပဲ။) 😀
အမေက သူ့အတိတ်ကို ဖုံးမထားချင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အဘွားဆီ အဖေ လာမတောင်းခင်ကတည်းက သူ့အတိတ် ဇာတ်လမ်းကို ဖြောင့်ချက်ပေးလိုက်တယ်။
အမေ ရိုးသားသလောက် အဖေက မရိုးသားဘူးလို့ ပြောရင် မမှားလောက်ဘူး ထင်တယ်။ သည်နေရာမှာတော့ အဖေနဲ့ ကျွန်တော် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ (တကယ်တော့ သည်နေရာမှာတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အရာတိုင်း နီးပါးမှာ အဖေနဲ့ ကျွန်တော် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးရော ကွေးကွေးကြီးပါ ဆန့်ကျင်တာတွေ ရှိပါတယ်။)
မွှန်နေချိန်မှာတော့ အမေ့အတိတ်က ဖြစ်ရပ်ကို သူနားလည်ပါတယ်၊ သဘောထားကြီးပါတယ်၊ ဘယ်လိုမှ မအောက်မေ့ပါဘူး စသဖြင့် ကောင်းပြီ ကောင်းရဲ့နဲ့ အမေ့ကို မရရအောင် ယူခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် အဲဒီ့အချက်ကို ကိုင်ပြီး တစ်သက်လုံး အမေ့ကို နိုင်စားသွားရုံမက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ညှဉ်းပမ်း နှိပ်စက်သွားတာတော့ ကျွန်တော့် မျက်စိအောက်တင်ပါ။
သည်နေရာမှာ မျိုးရိုးအရ အမေဇာတ်နာပုံလေးတွေလည်း ပြောပါရစေဦး။
ပထမဆုံးကတော့ အမေ့ အဖေဘက်က မျိုးရိုးပါ။
ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း အဖေက သူ့ဇာတ်ကို မြှုပ်ထားခဲ့တာမို့ အဖေ့မျိုးရိုးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဖေ့ အဖေနာမည် ဦးဘိုးသော်၊ အဖေ့အမေနာမည် ဒေါ်ယုန်ဆိုတာကလွဲပြီး အဖေ့မှာ တစ်မအေတည်းပေါက် မောင်နှမ ဘယ်နှယောက်၊ ဖအေတူ မအေကွဲ ဘယ်နှယောက် ရှိမှန်း၊ ဘယ်သူတွေ ဘယ်မှာ နေကြမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။
အမေကကျတော့ ဘာကိုမဆို အကုန် တုတ်ထိုးအိုးပေါက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြထားလို့ အမေ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို အစုံအလင် သိထားရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေ့အမျိုးတွေ ကြားထဲမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာမို့လည်း မျက်မြင်တွေလည်း ပါပါတယ်။
အမေ့ အဘိုး ဦးရှမ်းအကြောင်းကိုတော့ တစ်နေရာမှာ ရေးခဲ့ပြီး၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးပါပြီ။ မဖတ်လိုက်မိသူတွေ အတွက် အတိုချုပ် ပြန်ပြောရရင် ဦးရှမ်းက တောသူဌေးပါ။ ကပိုင်ဘက်က ဆိုလားပဲ။ ဌေးတာမှ ပထမကမ္ဘာစစ် မဖြစ်ခင်က မန္တလေးမြို့ကြီးမှာ မော်တော်ကား နှစ်စီးနဲ့ နေခဲ့သူပါ။ လယ်မြေတွေလည်း အများကြီး ပိုင်ပါသတဲ့။
သူက ဒေါ်သဲနုနဲ့ အကြောင်းပါပြီး ဒေါ်သီတာ (ထင်တယ်)၊ ဦးသုခ၊ ဦးချစ်မောင်၊ ဒေါ်သော်တာ၊ ဦးလှမောင်တို့ကို မွေးပါတယ်။
ဘေးတော်ကြီး ဦးရှမ်း ချမ်းသာတာလည်း မပြောနဲ့၊ အင်မတန် ဇယားကျတာကိုး။
သူ့ကားနှစ်စီးက အလှထားတာပါ။ စီးမယ်လုပ်ရင် ဘက်ထရီ အားကုန်နေလို့ တွန်းနှိုးရပါတယ်။ အလှူ မင်္ဂလာဆောင်ရှိမှ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားမှ ထုတ်စီးတာပါ။ ကျန်တဲ့အချိန်တော့ အကုန်လုံး စက်ဘီးပဲ စီးကြလေသတည်းပေါ့။
ညဆိုလည်း ဦးရှမ်းက မအိပ်ပါဘူး။ အဲဒီ့ခေတ်က သူခိုး ဓားပြရန်ကလည်း အခါမလပ်ရှိနေတော့ တစ်ညလုံး အိပ်ဖန်စောင့်ပါတယ်။ သူမအိပ်ကြောင်း သူခိုးသူဝှက်တွေ သိအောင် ဆေးလိပ်ခွက်လုပ်ထားတဲ့ ငါးသေတ္တာ ဘူးခွံတို့ ဘာတို့ကို တဂျောက်ဂျောက်ခေါက်လိုက်၊ ဘာလိုက် ညာလိုက်နဲ့တဲ့ဗျ။
အိမ်နေရင်း ၀တ်တာက စွပ်ကျယ်။ စွပ်ကျယ်ကိုလည်း ဘယ်လောက် ပြဲနေနေ ၀တ်သေးသတဲ့။ သူမ၀တ်တော့တဲ့ တစ်နေ့ လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ စွပ်ကျယ်စုတ်ဟာ လက်နှီးစုတ်တောင် လုပ်မရအောင် စုတ်ပြဲနေပြီလို့ အဆိုရှိပါတယ်။
အဲဒီ့ထက် ဇယားကိုက်ပြလိုက်ပုံကတော့ တစ်နေ့လုံးမှ မီးခြစ်ဆံ တစ်ခြမ်းပဲ သုံးတဲ့ အမှုပါ။
အဲဒီ့ခေတ် မီးခြစ်ဆံတွေက အတော်ကောင်းပုံရတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် မှိုတက် မီးခြစ်ဆံတွေနဲ့ တခြားစီဖြစ်မှာပါ။ အဲဒါတွေနဲ့သာ တွေ့ရင် ဦးရှမ်းတစ်ယောက် ဘယ့်ကလောက်များ စိတ်ညစ်ရှာမလဲ မသိဘူး။ တစ်ဘူးလုံးမှ အလွန်ဆုံး သုံးဆံလောက် ခြစ်လို့ ရတာကိုး။ ဆိုရှယ်လစ် တံခိုးကြီးပုံ ပြောပါတယ်။
အဲ… သူတို့ခေတ်က မီးခြစ်ဆံက ကောင်းတော့ အဲဒီ့မီးခြစ်ဆံ တစ်ဆံကို အလျားလိုက် နှစ်ပိုင်း ခွဲလိုက်တယ်။ တစ်ပိုင်းကို တစ်ရက် သုံးတာပါ။ မနက်လင်းတဲ့အချိန် အဲဒီ့ မီးခြစ်ဆံနဲ့ စတင်ပြီး မီးဖိုကို မီးမွှေးထား။ အဲဒီ့ မီးဖိုက မီးသွေးခဲလေးကို ပြာလေးနဲ့ အသာဖုံးပြီး အလျဉ် မပြတ်အောင် ထား၊ တစ်နေကုန်သုံး။ ည အိပ်ချိန်ရောက်တော့မှ မီးကြွင်းမီးကျန် မကျန်အောင် ရေလောင်းပြီး သတ်။
နောက်တစ်နေ့ကျတော့ ကျန်တဲ့ တစ်ခြမ်းနဲ့ မီးမွှေး၊ တစ်နေကုန်သုံး။ အဲသလို စေ့စပ်တာ။
သူ့သားသမီး ငါးယောက်မှာ ယောက်ျားတွေပဲ အိမ်ထောင်ကျကြတယ်။ မိန်းမတွေက အိမ်ထောင်ကျ မသွားကြရှာဘူး။
အိမ်ထောင်မကျကြဆို ကံဆိုးချင်တော့ သူ့မှာ သမီးနှစ်ယောက်ပဲ ရှိတာ၊ နှစ်ယောက်စလုံးက အနာကြီး ရောဂါသည်တွေ ဖြစ်နေတာပါပဲ။
ထူးဆန်းတာက ကျန်တဲ့ သားသုံးယောက်ကျတော့ အဲဒီ့ ရောဂါ မဖြစ်ဘူးဗျ။
သည်တစ်ပိုင်းမှာ ပြောကြ ဆိုကြတာလေးတွေ
Oakker Seithuဒီစာရဲ့ မူလ လားရာက အဆိုတော် ဦးအံ့ကြီးနဲ့ တွေဆုံခြင်းလို့ ထင်တာပဲ … မေ့တောင်မေ့နေပြီ
Htar Htar Myintဦးအံကြီး ဦးအံကြီး လို့ ပဲ သတိပေးရင်းစာဖတ်ရတယ်
ATKဟိုအိုအိုအို… ဂနိုင်တွင်းမှာလ… ဗျာ…. သင်း ကြည်ကြည်ကြူ…. သင်း ကြည်ကြည်ကြူ… နှင်းဆီဖြူ ပင်ဇလပ်တွေနဲ့… နှင်းဆီဖြူ ပင်ဇလပ်တွေနဲ့… ဝေဆာဆာ ကြိုင်ရနံ့ငယ်…. ကြိုင်ရနံ့ငယ်… ကြိုင်ရနံ့ငယ်… ဝေဆာဆာ ကြိုင်ရနံ့ငယ်…. မောင်မင်းတို့ရေ…
Mai Xinh Depဟုတ်ဘူး ဦးအံ့ကြီး မဟုတ်ဘူး အဖေ့ရေတပ်ဘောင်းဘီလားလို့ အခုထိ ရေတပ်ဘောင်းဘီ ဘာဖြစ်မှန်း မသိရသေးဘူး
Mai Xinh Depဘာမှ အဏုပြင်ညာမှော် မဟုတ်တော့ဘူး အဘိုးကြီး ဖြစ်လာတာပြတာ ခိခိ
ATKရိုင်းထှာအေ… ညည်း ဘယ်ဥက ပေါက်သဒုံး… ဂလောက်ရိုင်းဒါ
Mai Xinh Depခိခိ ဘယ်ဥက ပေါက်သလဲ ဒယ် သိပါတယ်
Wei Phyo Maungဆရာရေ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းရဲ့တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ၊ဆရာသော်တာဆွေရဲ့ ကျွန်တော်ဘဝဇာတ်ကြောင်းစာအုပ်တွေလို ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိတစ်အုပ် ရေးပါလားဆရာ
ATKမနိုင်းကောင်း မနှိုင်းရာဗျာ။ မိုးကြိုးတွေ ပစ်ကုန်ပါ့မယ်။ ဟိုဆရာတွေက ဧရာမ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါ။ ကျွန်တော်က ပါချီပါချက် ငမျောက်ငချောက်ကလေးပါ။
အဲ… သို့သော်လည်း ကျွန်တော့် သားသမီးတွေအတွက် မှတ်တမ်း မှတ်ရာလေး ကျန်ရစ်အောင် ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိလေး ရေးမယ်ကြံပြီး ဒါကို အဲဒီ့ဘက် ပြောင်းတည်လိုက်တော့တာလည်း ၀န်ခံပါတယ်ခင်ဗျ။
တစ်အုပ်စာတော့ ကောင်းကောင်း ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဟိုဆရာကြီးတွေနဲ့တော့ မနှိုင်းပါနဲ့ ခင်ဗျ။
Thet Chowအဲဒီစာအုပ်ထွက်ရင် လိုချင်တယ်အေ။
စု စုအေးဆရာက မနှိုင်းနဲ့ပြောပေမဲ့ သူတို့လို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးတာ ဒီတခါပဲဖတ်ဖူးတာဆရာ။
ကျန်တာတွေက အနဲနဲ့ အများတော့ လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်ကြတာချည်းပဲလို့ ဖတ်လိုက်တာနဲ့ သိလောက်တဲ့ စာမျိုးတွေများသကော…
ATKဟုတ်မယ် အန်တီစုရေ… ကျွန်တော့်အပေါ်မှာတော့ ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းနဲ့ ဆရာသော်တာဆွေတို့ရဲ့ သြဇာတွေက အကြီးကြီး ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဘ၀တစ်သက်မှာ ဆရာသော်တာဆွေကို လူချင်း တစ်ကြိမ်ပဲ ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆရာ မဆုံးခင် နှစ်ပိုင်း အလိုလေးမှာပါ။
ဒါပေမယ့် သူ့စာတွေထဲက ပွင့်လင်းမှုများကြောင့် ဆရာ့ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ဦးလေး သားချင်းကို တွေ့လိုက်ရသလို ချစ်ခင် ရင်းနှီးတဲ့ စိတ်က တားဆီးလို့ မရဘူး။ အတွင်းသိ အစင်းသိလို ဖြစ်နေတော့တာကိုး။
ဆရာမောင်သာရ၊ ဆရာအောင်သင်း၊ ဆရာငြိမ်းကျော်၊ ဆရာဇော်ဇော်အောင်တို့နဲ့ဆိုရင်လည်း တရင်းတနှီး နေခဲ့ဖူးတာပါပဲ။ ကြိမ်ဖန်များစွာ ဆုံခဲ့၊ နာရီပေါင်းများစွာ စကားပြောခဲ့ဖူးပေမယ့် ဆရာသော်တာဆွေ့အပေါ်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မြင်လိုက်ရုံနဲ့ ရင်းနှီးချစ်ခင်သွားတဲ့ စိတ်မျိုး ပေါ်မလာခဲ့ဖူးဘူး။ ကြည်ညိုလေးစားမှုတော့ ရှိပါတယ်။ သို့သော် ရင်းနှီးချစ်ခင်မှု သိပ်မရှိတာကို ပြောချင်တာပါ။
အဲဒီ့မှာ သင်ခန်းစာ ရလိုက်တယ်။ ပဲများခြင်းဟာ ချစ်ခင်မှုကို မဖြစ်စေဘူး။ ပွင့်လင်းခြင်းကသာ လူနဲ့လူချင်း ရင်းနှီးမှုကို ဖြစ်စေပါကလားဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာပါ။
တစ်ဖက်ကကျပြန်တော့ ကျွန်တော့်အမေကလည်း အင်မတန် ပွင့်လင်းပါတယ်။ သူ့ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်း အကုန်အစင် ကျွန်တော့်ကို ပြောပြခဲ့တာပဲ ကြည့်တော့။ ပြောသင့်တာတွေ မပြောသင့်တာတွေကို မေမေက ဆင်ခြင်မနေခဲ့ပါဘူး။ အကုန် ပြောပြခဲ့တာပါ။
မေမေက မွေးလို့ လူဖြစ်လာရတဲ့ ကျွန်တော်သည်လည်းပဲ မေမေ့သားပီသစွာ…
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်
ဆွေရင်း မျိုးရင်းထဲမှာ အနာကြီး ရောဂါသည် ရှိနေတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး လာဘ်တိတ်ဖို့ အကြောင်းဖန်နေပြန်တာပေါ့။
အမေ့မှာက အိမ်ထောင်ပျက်ဖူးတဲ့ ပြစ်ချက်က တစ်ချက်၊ အနာကြီးရောဂါသည် မျိုးရိုးရှိနေတဲ့ အနာအဆာက တစ်ကွက်နဲ့မို့ သူနေတဲ့မြို့ ရွှေမန္တလေးမှာ လင်ကောင်း သားကောင်းရဖို့ အတော် ခက်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
အဲတော့ အမေက တောင်ပံကျိုးနေတဲ့ ဆက်ရက်။ အဖေက ခံတွင်းပျက်နေတဲ့ ကြောင်။ ဇာတ်ပေါင်းတော့ သူတို့နှစ်ဦး ညားကြလေသတည်းပေါ့။
ဦးရှမ်းက မွေးတဲ့ သားသမီး ငါးယောက်အနက် အကြီးဆုံး သမီး ဒေါ်သီတာက ပလိပ်ရောဂါနဲ့ စစ်အတွင်းမှာပဲလား၊ စစ်မဖြစ်ခင်ကပဲလား ဆုံးသွားတယ်။
သားထဲမှာ အကြီးဆုံး ဦးသုခက ဒေါ်ဦးဇွန်းနဲ့ ညားတယ်။
အမေ့ အမေဘက်က မျိုးရိုး
ဒေါ်ဦးဇွန်းဆိုလို့ လူအိုရုံအလှူရှင် ဒေါ်ဦးဇွန်းနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ နာမည်ချင်း ဆင်တာပါ။ သည် ဒေါ်ဦးဇွန်းက ပေါက်ဖော်ကပြားပါ။ ဒေါ်ဦးဇွန်းရဲ့ အဖေက ပြည်ကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ တရုတ် ပြည်မကြီးကနေ ရောက်လာတဲ့ တရုတ် စစ်စစ်ကြီး။ နောက်ဆုံးတော့ သွက်သွက်ခါအောင် ရူးသွားတယ်လို့ အမေက ပြောတယ်။
ဒေါ်ဦးဇွန်းတို့က ဗန်းမော်မှာ မွေး၊ ရေဦးမှာ နေခဲ့ကြရင်း နောက်ဆုံး မန္တလေးမှာ အခြေချတာပါ။ တရုတ်သွေးတွေ အများကြီး ပါပေမယ့် တရုတ်စကား တစ်လုံးမှ မတတ်တော့ဘဲ ဗမာလို ပီပီသသကြီး ပြောကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပကတိ မန္တလေးသူကြီးပေါ့။
ဦးသုခနဲ့ ဒေါ်ဦးဇွန်းက ဦးမြတ်ထွန်းနဲ့ ကျွန်တော့်အမေကို မွေးတယ်။ ဦးမြတ်ထွန်းက ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း (ဦးဖေသိန်း)ရဲ့ ညီ ဦးဖေစိမ်းက မွေးတဲ့ ဒေါ်ခင်ရီနဲ့ ညားတယ်။ သမီးလေးတစ်ယောက် မွေးပေမယ့် အဖတ် မတင်ဘူး။ ကျွန်တော့်အမေက ကြောင်ခံတွင်းပျက် ကျွန်တော့်အဖေနဲ့ ညားတယ်။ တော်တော်နဲ့ ကလေးက မမွေးဘူး။
အိမ်ထောင်သက် သုံးနှစ်အကြာအထိ ကိုယ်ဝန်မရတာမို့ နောက်တစ်နှစ်နေမှ ကလေးမရရင် ကွာမယ်လို့ အဖေက ရာဇသံ ပေးတာကြောင့် အမေ့မှာ သားဖွား မီးယပ်ဆရာဝန်ဆီ ပြေးရတယ်။ ဆရာမကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းက ကြည့်ပေးခဲ့တယ်လို့ အမေက ပြောပြပါတယ်။
အမေက မွေးရာပါ သားအိမ်စောင်းနေတာတဲ့။ အဲဒါကို ဒေါက်တာ ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းက ယာယီ ပြန်တည့်ပေးလိုက်တယ်။ မီးဖွားပြီးရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်စောင်းရမယ်လို့လည်း ဆိုတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်တစ်ကောင် လူ့လောကထဲ ရောက်လာပါတော့သတည်းပေါ့။
သားအိမ်ကို မွေးရာပါအတိုင်း ပြန်စောင်းလိုက်ပြီးတဲ့သကာလ ကျွန်တော်သည်လည်း တစ်ကောင်ကြွက် ဖြစ်ရပါလေတော့သတည်းပေါ့။
ဇာတ်က အတော်နာလာပြီနော်။ ရေးရင်းတောင် နှပ်တွေ ထွက်ချင်သလို ဖြစ်လာပြီ။ 🙂
အဘိုး ဦးသုခကို ကျွန်တော် မမြင်ဖူးလိုက်ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံထဲတော့ မြင်ဖူးပါတယ်။ ရှေးမြန်မာ၊ အသားညိုညို ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းပါ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာတောင် အတော် ဂိုက်ပေးကြမ်းပါတယ်။ အဘွားက ဖြူဖြူ ချောချောပါ။
အဘိုးက စပါးပွဲစားလို့ ပြောပါတယ်။ တကယ်တော့ အာပလာပဲ ဖြစ်မှာပါ။ မန္တလေးမှာ ပွဲစားကြီးတွေက ဘာမှ သိပ်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလေလိုက်နေတာ များပါတယ်။ ပွဲကတော်ကြီးတွေကသာ ရှာရ ဖွေရ လုံးပမ်းရတာပါ။ မန္တလေးသား စစ်ရင် လက်ကြောမတင်းဘူးလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ မန္တလေးသား စစ်စစ် မှန်ရင် ဟိုယောင်ယောင် သည်ယောင်ယောင်နဲ့ အလေလိုက်နေတာ များပါတယ်။ ဟိုခေတ်က ပြောပါတယ်နော်။ သည်ခေတ် မန်းလေးသားတွေ မနာကြေး။ မှန်ရင်လည်း ငြိမ်ခံနေကြပေါ့ဗျာ။
အဘိုးက စပါးပွဲစားသာဆိုတယ် သူ့ခေတ် သူ့အခါနဲ့ သူ့ကို လူသိများတာက မေဃဂီရိရပ်က အငြိမ့်ထောင် ကိုသုခအဖြစ်နဲ့ပါ။
ဒါလည်း ရေးပြီးပါပြီ။ သို့သော် မဖတ်မိသူတွေ သိအောင် နှစ်ထပ် ပြန်ရေးပြရပြန်ရင် အဘိုးဦးသုခက အင်မတန် မြာပွေပါတယ်။ သူတို့ခေတ်က ဓာတ်ရှင်တွေ သိပ်မထွန်းကားသေးတော့ သူ ပွေတဲ့နည်းက အငြိမ့်ထောင်ပြီး အငြိမ့်မင်းသမီးတွေကို ခြေတော်တင်တဲ့ နည်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါသတဲ့။ သူဌေးသား ပီသတာပေါ့ဗျာ။
အဘိုးအငြိမ့်မှာ နောင်အခါ မြို့တော် သိန်းအောင်၊ မြို့တော် ပေါစံအဖြစ် ထင်ရှားလာမယ့် ညီအစ်ကိုတွေရဲ့ အစ်ကိုအကြီးဆုံး၊ အရွယ်ကောင်းမှာ ကွယ်လွန်ရှာသူ မြို့တော် မြစိန်အပါအ၀င် ညီအစ်ကိုတစ်တွေ ကခဲ့ဖူးသလို ယနေ့ စာရေးဆရာကျော် ချစ်ဦးညိုရဲ့ ဖခင် ဆရာကြီး ရွှေဒေါင်းညိုသည်လည်း အဘိုး အငြိမ့်ထွက်ပါ။ ဒါ့အပြင် ဆင်ကြီးဂဠုန်ချီဆိုတဲ့ နန်းရှေ့ ဆရာတင်ရဲ့ သီချင်းကို မူရင်း သီဆိုခဲ့သူ ပျော်တော်ဆက် မတင်အောင် ဆိုတာလည်း အဘိုးအငြိမ့်ထွက်ပါပဲ။ သည်တစ်ခါတော့လေ… တင်အောင်လေးကို… အရွဲ့တိုက်တယ်လို့ ထင်ပါသည်ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ သီချင်းပေါ့။
အဲဒီ့ ပျော်တော်ဆက် မတင်အောင်ဆိုတာက အဲဒီ့ခေတ်မှာ အဆိုအက ပညာထက် အညု အတာ အခရာတွေ အလှုပ်အခါတွေ သုံးပြီး ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားခဲ့တာမို့ သဘောမကျတဲ့အကြောင်းကို ဆရာသိန်းဖေမြင့်ရဲ့ စာတစ်ပုဒ်ထဲမှာ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ (ဘယ်တစ်ပုဒ်လဲဆိုတာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာ။ စိတ်ဝင်စားရင် ကိုယ့်ဘာသာ ရှာကြည့်ကြပါတော့ ခင်ဗျ။)
အဘိုးရဲ့ မြာပွေချက်ကမ်းကုန်ပုံကတော့ အဘိုးဟာ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်မှာတင် ကာလသားရောဂါနဲ့ ဆုံးပါတယ်။ (ကျွန်တော့်မျိုးရိုးကောင်းပုံ ပြောပါတယ်။) အဲတော့ ကျွန်တော် ဘယ်မြင်ဖူးလိုက်ပါ့မလဲ။
အဘွားဒေါ်ဦးဇွန်းကလည်း အဘိုးဒဏ် ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဘိုးရဲ့ ကာလသားရောဂါ ဒဏ်ကို သူပါ ဆင့်ပွား ခံစားရပြီး ၄၀ ကျော်မှ မျက်စိကွယ်သွားရှာပါတော့တယ်။
၄၀ ကျော်မှ မျက်စိကွယ်တာမို့ အဘွားက စာကောင်းကောင်းတတ်ပါတယ်။ မန္တလေးမှာ အနေကြာတာမို့ မြန်မာစကားကလည်း ပကတိမန္တလေးသူကြီးနှယ် ကြွယ်ဝလှပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အောင်သိန်းကျော်ဆိုတဲ့ နာမည်က အဘွားက ပေးခဲ့တာပါ။ န၀င်းကျေ တြင်းကျေ နာမည်ဖြစ်နေတာမို့ နောင်အခါမှာ သည်နာမည်ကို ဘယ်သူက ပေးသလဲဆိုပြီး တချို့ ဗေဒင်ဆရာတွေက မေးတဲ့အခါ ကျွန်တော့်မှာ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်။
အဘွားက အဲသလို ထက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မြန်မာစာ မြန်မာစကား စွမ်းရည်အတွက် လက်ဦးဆရာက အဘွားလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၀င်း(န်)၀င်း(န်)ဆလူးရှင်းတဲ့လား… တားရို့ဂ ပျင်းတောင် ပျင်းသေး
ကျွန်တော့်အမေက အဘွားကို မေမေလို့ ခေါ်တာမို့ ကျွန်တော်ကလည်း သံယောင်လိုက်ပြီး အဘွားကို မေမေလို့ပဲ ခေါ်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ အဲဒါကို အမေနဲ့ အဘွားတို့က ဘွားဘွားလို့ ခေါ်ဖို့ ပြင်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း ကလေးကတည်းက ဇက ပြပါတယ်။ သူတို့ ခေါ်စေချင်သလို ဘွားဘွားလို့ ချည်းပဲလည်း မခေါ်ချင်ဘူး၊ ကျွန်တော် ခေါ်ချင်တဲ့ မေမေလည်း ပါစေ၊ သူတို့လည်း ကျွန်တော်လည်း ကျေနပ်နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်း (ခေတ်ပေါ်စကားနဲ့ဆို ၀င်း(န်) ၀င်း(န်) ဆလူးရှင်းပေါ့နော်) ကို ရွေးတဲ့လိုက်ပြီး မေမေဘွားဘွားလို့ ခေါ်ချလိုက်ပါတော့သဗျား။
ကျွန်တော်တို့များ အဲသလို… ၀င်း(န်) ၀င်း(န်) ဆလူးရှင်းကို လမ်းမလျှောက်တတ်ခင် ဖင်တရွတ်တွန်း သွားနေကတည်းက မွေးရာပါ တတ်ခဲ့တာကလား။
ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း အရေးကောင်းတာများ ရေးနေတုန်းတန်းလန်း မနေ့ညက (၂၀၁၅ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ည) ဦးကြီးကိုကိုက ကျွန်တော့်ပါးကို လာနမ်းသွားတယ်လို့ အိပ်မက် မက်ရပြန်ပါရောလား။
ဦးကြီးကိုကို ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ရှစ်နှစ်လောက်တောင် ရှိပါပြီ။ သည်ကာလအတွင်းမှာ တစ်ခါဆို တစ်ခါဖူးမျှ အိပ်မက် မမက်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ မနေ့ညကမှ ကြံကြံဖန်ဖန် မက်ပါတယ်။
မက်ဆို မေမေဘွားဘွားအကြောင်းရေးရင် ဦးကြီးကိုကိုကလည်း မပါမဖြစ် ပါရမှာပါ။ အဘွားကို မေမေဘွားဘွားလို့ ခေါ်သလို ဦးကြီးကိုလည်း ဦးကြီးကိုကိုလို့ ကျွန်တော်က ခေါ်ပါတယ်။ မေမေက သူ့အစ်ကိုကို ကိုကိုလို့ ခေါ်တာမို့ စကားတတ်စ ကျွန်တော်ကလည်း ကိုကိုလို့ လိုက်ခေါ်ခဲ့ပုံပါပဲ။ အဲတော့ အမေတို့၊ အဘွားတို့က အဲလို မခေါ်ရဘူး၊ ဦးကြီးလို့ ခေါ်လို့ ၀ိုင်းသင်ခဲ့ကြမှာလည်း သေချာပါတယ်။
အဲတော့ ကျွန်တော့် ဖင်တရွတ်တွန်း ၀င်း(န်)၀င်း(န်)ဆလူးရှင်း ဉာဉ်ကလေးနဲ့ ဦးကြီးကိုကိုလို့ ခေါ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ဖင်တရွတ်တွန်းကိစ္စ (ကျွန်တော့်အစုတ်ထုပ် နောက်တစ်ထုပ်)
ကလေးတွေမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် မတ်တတ်စမ်းတာက အရင်၊ စကားပြောတာက နောက်ပါ။
အဲ… ကျွန်တော် ကိုလေပေါကတော့ အဲသလို မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ စကားကို အရင်ပြောပါတယ်။ စကား တော်တော်ပြောနိုင်တဲ့အထိ မတ်တတ် မစမ်းသေး၊ လမ်းမလျှောက်သေးပါဘူးတဲ့။ အမေတို့မှာ ကျွန်တော် လမ်းမှ လျှောက်တတ်ပါတော့မလား၊ ချိများ ချိနေပြီလားလို့ ပူယူရတဲ့အထိကို ကျွန်တော်က လမ်းလျှောက်တာ နောက်ကျပါသတဲ့။
အမှန်တော့ အပျင်းက အဲဒီ့ကတည်းက ထူတာနေမှာပါ။ ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ဆို ဘာမှ မလုပ်ချင်တာများ ခုထက်ထိ။ ထမင်းတောင် ထခူးစားရမှာ ပျင်းရင် သည်အတိုင်း ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ မှောက်အိပ်နေတတ်တဲ့ မဟာ့မဟာ ရွှေပျင်းကြီးပါ။
Khin Myo ဆန့်တငန့်ငန့်နဲ့ ဟင့်
ATK ဘေတီးတို့ ခေတ်လူငယ်ဒေမှာဂ အချိန်က ပါးရှားတယ်လေ။ တစ်ခါတည်း အများကြီး မဖတ်နိုင်မှာစိုးလို့ သများဂ စေသနာနဲ့ ပိုင်းပိုင်းပြီး ရေးပေးနေဒါဂိုဗျဲ 😛
Soe Myat Myo Shwe နှစ်ရက်လောက်နေမှ တစ်ခါပြန်လာဖတ်ရင် အတော်လောက်ပဲ…။ အဖေ အမေတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိတုန်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ယူထားဖို့ သတိပေးသလိုဖြစ်သွားပါတယ်
ATK မှတ်တမ်း မှတ်ရာသာ မကဘူး သမီး Soe Myat Myo Shwe ။ စကားတွေ အများကြီး ပြောရင်းနဲ့ကမှ ထွက်ထွက်လာတတ်တာ။ တစ်ခုခု အစဖော်လိုက်လို့ သူတို့ စိတ်လိုလက်ရ ပြောတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က အချိန်ပေးနားထောင်ဖို့ပါ လိုပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
San Tin It’s hilarious!!!You used lots of sarcasm in your writing (you are really good at it). Sarcasm can also bring laughs and smiles as long as you use good-natured humor and avoid insults. It really made me smile while reading it. I don’t even remember how many times I repeated. Very funny.
May Thandar Win ပျော်တော်ဆက်မတင်အောင်အကြောင်းပါတာ သိန်းဖေမြင့်ရဲ့ စာပေဘဝဇာတ်လမ်းစုံထဲမှာ ဆရာ
ATK အဲဒါတွေကြောင့် သာမီးမေ့ကို အားကိုးနေရတာ 🙂
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်
ပြောရရင် ကျွန်တော်က အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းမဟုတ်ဘူး၊ အဖေကျော် ဦးကြီး လွမ်းတဲ့ကောင်။
ဦးကြီးကိုကိုကလည်း ပကတိ သူဌေးသား။ လူပေါ်ကြော့။ တစ်သက်လုံး ဘာအလုပ်မှ မည်မည်ရရ လုပ်မသွားဘူး။ ကျောင်းလည်း ဆုံးခန်းတိုင်အောင် နေမသွားဘူး။ စစ်ဖြစ်တာ ဘာညာကြောင့် ပညာရေး ကမောက်ကမပေမယ့် သူနေချင် နေလို့ ဖြစ်သည့်တိုင် အတန်းပညာလည်း သိပ်လောက်လောက်လားလား ဟုတ်ခဲ့ပုံ မရဘူး။ သူတို့ခေတ်၊ သူတို့အခြေအနေနဲ့ သာသနာပြုကျောင်းကောင်းမှာ နေခဲ့ရတော့ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံလေးတော့ ရှိသပေါ့။ ခုခေတ် ဘွဲ့ရတွေ၊ ပြည်တွင်းဖြစ် ပါရဂူဆိုသူတွေထက် အင်္ဂလိပ်စာတော့ ပိုတတ်သပေါ့။
သို့သော် ဦးကြီးကိုကိုက အနေအေးတယ်။ တစ်နေ့လုံးနေလို့မှ စကားတစ်ခွန်း ပြောတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့မှာ သားသမီး မရှိတော့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ချစ်တယ်။ ရိုက်တာ နှက်တာတွေ မလုပ်ဘူး။ အဖေကတော့ အလွန်ရိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုသာ မဟုတ်ဘူး၊ အမေ့ကိုပါ ညိုမည်း ဖူးရောင်တဲ့အထိ ရိုက်နှက်တာတွေ လူမှန်းသိကတည်းက မြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ အဖေဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် ကြောက်စရာ၊ ရွံ့စရာ၊ မုန်းစရာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတို့၊ ကျား-မအခြေခံ အကြမ်းဖက်မှုတို့အကြောင်းကို ကျွန်တော်က ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီး ခံခဲ့၊ သိခဲ့ရတဲ့သူမို့ အဲဒါတွေ အခုလို တွင်ကျယ်မလာခင် ပဝေသဏီကတည်းက အင်မတန် စက်ဆုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက်ကြောင့်လည်း သားငယ် သမီးငယ်များ ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းခြင်း အနုပညာလို စာအုပ်မျိုး၊ ထိမ်းမြားပေါင်းဖက် ရန်ဖြစ်လျက်ပင် ချစ်ကြင်နေနည်းလို စာအုပ်မျိုးတွေ ရေးဖြစ်ကုန်တာ့တာပါ။
ဦးကြီးကိုကိုကကျတော့ အနုသမား။ တယောလေးကလည်း ထိုးသေးတယ်။ ၀တ်တာ စားတာကလည်း စမတ်ကျတယ်။ အိမ်မှာနေရင်တောင် ဘိုကေကို ကျော့နေအောင်ဖြီးလို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် မွှေးမွှေးကြိုင်ကြိုင် နေတာ၊ အရပ်မြင့်မြင့်၊ လူပုံချောချော၊ ကိုယ်လုံးသွယ်သွယ်နဲ့၊ ဦးကြီးကိုကိုများ ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ ဘွတ်နဲ့ ရွှတ်နဲ့ ဆိုရင် အလွန်ကြည့်ကောင်းတာ။
အဲတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ဦးကြီးကိုကိုကို ချစ်တယ်။
ကျွန်တော် လုံးဝ မမှတ်မိတဲ့ ဘထွေးတစ်ယောက်လည်း ရှိသေးတယ်။
ကျွန်တော် စကားသင်စအရွယ်က အတူနေခဲ့တာတဲ့။
ဒါတော့ မေမေပြန်ပြောလို့ သိနေတာပါ။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင် မရှိပါဘူး။
အဲဒီ့ ဘထွေးဟာ ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ အဲဒီ့တစ်ခါပဲ ဆုံလိုက် ကြုံလိုက်ဖူးတဲ့ အဖေ့ ဖအေတူ မအေကွဲ ညီပါတဲ့။ သူ့နာမည်က (ဦး)သိန်းအောင်လို့ သိရပါတယ်။
သူက ဘယ်လိုကြောင့်တော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးအိမ်မှာ အချိန်အတော်ကြာကြာ နေသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်က သူ့ကို ရေးရေးပေါ်ပေါ်လို့ ခေါ်ပါသတဲ့။
အဲ… အဲဒီ့အခေါ်အဝေါ်က တော်တော်တော့ ဆန်းမယ် ထင်ပါတယ်။ သို့သော် ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ခင်ဗျ။
အဲဒီ့ ဦးသိန်းအောင် လာနေချိန်မှာ သူ့အသက်အရွယ်က ၂၀ ကျော်လောက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့အချိန်က စန္ဒယားချစ်ဆွေ ရေးပြီး မာမာအေး သီဆိုတဲ့ သက်တံပေါ်မှာ ကစားမယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းက လူတကာ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အချိန်ပါ။
ဦးသိန်းအောင်ကလည်း အဲဒီ့ သီချင်းကို တစ်ချိန်လုံး တကြော်ကြော်ဆိုနေခဲ့ပါသတဲ့။ သူဆိုတာက တစ်ပုဒ်လုံး ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ပုဒ်လုံးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် နားထဲမှာတော့ သက်တံ တံတားကြီး ရေးရေးပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အပိုဒ်က ရေးရေးပေါ်က စွဲနေပုံပါပဲ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း ရေးရေးပေါ်ပေါ်၊ ရေးရေးပေါ်ပေါ်လို့ လိုက်အော်ရင်းကနေ သူ့ကိုလည်း ရေးရေးပေါ်ပေါ်လို့ ခေါ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်။
အဆိုရှိပါတယ်ပြောရတာက ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း သူနဲ့ နေခဲ့တာက ကျွန်တော့်အမှတ်သညာမှာ စွဲစွဲထင်ထင် မရှိတော့လို့ပါပဲ။
ခုမှ မျက်ရည်လည်တဲ့ မြေးအမိုက်အမဲ
မန္တလေးအိမ်မှာက တကယ်တမ်း ပြောရင် အမေရယ်၊ ဦးကြီးကိုကိုတို့ လင်မယားရယ်၊ မျက်မမြင်အဘွားရယ်နဲ့ နေခဲ့တာတွေပဲ ကျွန်တော့်အမှတ်သညာမှာ စွဲစွဲထင်ထင် ရှိပါတယ်။ အဖေတောင် မပါပါဘူး။
သည်လေးယောက်ထဲမှာတောင်မှ မေမေတို့၊ မေမေဘွားဘွားတို့က ပိုပြီး စွဲစွဲထင်ထင် ရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်က မေမေဘွားဘွားနဲ့ နေရတာ များပါတယ်။ မျက်မမြင်အဘွားက ကျွန်တော့်ကို ထိန်းတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော် ဖင်တရွတ်တွန်း သွားပြီး စကားတွေ ပြောတဲ့ အရွယ်မှာ အဘွားက ပိုထိန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အမျှင်မပြတ်အောင် စကားတွေ ပြောပြီး ထိန်းတဲ့ နည်းကို သုံးခဲ့ပုံရပါတယ်။
အမေလည်း မရှိတော့ဘူး၊ ကျွန်တော် မွေးတဲ့အချိန်မှာ အတူနေခဲ့တဲ့ လူကြီးသူမတွေလည်း မရှိကြတော့ဘူး ဆိုတော့ အတိအကျ ပြန်မေးလို့တော့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က စာလည်း အရွယ်တော်တော် စောစောကတည်းက စဖတ်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါတော့ မဆန်းပါဘူး။ အမေက စာသိတ်ဖတ်တဲ့အပြင် ကျောင်းဆရာမလည်း ကျောင်းဆရာမဆိုတော့ ကျွန်တော်နဲ့ စာနဲ့ မဝေးခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲတော့ မေမေဘွားဘွားကိုလည်း နေ့စဉ်သတင်းစာတွေ ဖတ်ဖတ်ပြခဲ့ရပါသတဲ့။ အမှန်တော့ ကျွန်တော့်ကို ငြိမ်အောင် ထိန်းတဲ့ နည်းတစ်နည်းပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း မေမေဘွားဘွားက ကြီးမှ မျက်စိကွယ်သူဖြစ်ပြီး စာလည်း ကောင်းကောင်း တတ်လေတော့ကာ သတင်းစာထဲက စကားလုံးတွေ ကျွန်တော် ဖတ်ပြတာ အသံထွက် လွဲနေရင် အမှန်အတိုင်း ပြင်ပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သည်အတွက် ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာစကားကို အသံထွက် မှန်မှန်နဲ့ ဌာဏ်ကရိုဏ်းကျကျ ပြောတတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မေမေဘွားဘွားက ရှေးအဘွားများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပုံတိုပတ်စတွေ၊ ဘုရားဟော ဇာတ်နိပါတ်တွေလည်း ပြောပြခဲ့တာမို့ ကျွန်တော့် မြန်မာစာစွမ်းရည်အတွက် လက်ဦးဆရာဟာ မေမေဘွားဘွားရယ်လို့ ရှေ့မှာ ရေးခဲ့တာပါ။
အဖေက တရုတ်စစ်စစ်ကြီးဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ မွေး၊ တရုတ်စကား လုံးလုံး မတတ်တော့တဲ့ ပကတိ မြန်မာစစ်စစ် အဘွားတစ်ယောက်လို နေပြီး ကျွန်တော့်ဘ၀ အစအဦး ဖြစ်တည်မှုမှာ မျက်စိမမြင်တဲ့ကြားက စွမ်းသလောက် အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ မေမေဘွားဘွားကျေးဇူးကို သည်စာရေးတော့မှ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဦးခိုက် ပူဇော်မိပါတယ်။
တစ်သက်လုံး မေ့မေ့လျော့လျော့နေခဲ့မိတဲ့ မြေးအမိုက်အမဲကို ခွင့်လွှတ်ပါ မေမေဘွားဘွား….
ကျွန်တော့်ကို မွေးချိန်မှာ အဖေ့အဖေက သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးပေမယ့် အဖေနဲ့ သူ့အဖေနဲ့က ဘာမှ အဆက်အဆံ မရှိတာမို့ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီ့ အဘိုးကို မမြင်ဘူးလိုက်ပါဘူး။ ဦးသုခကလည်း ကျွန်တော့် မမွေးခင် ပဝေသဏီကတည်းက ကွယ်လွန်ပြီးမို့ အဲဒီ့အဘိုးကိုလည်း မမြင်ဘူးပြန်ဘူး။
သာတာက ဦးသုခကို ဓာတ်ပုံနဲ့တော့ မြင်ဖူးလိုက်သေးတာပါပဲ။ အဖေ့အဖေ ဦးဘိုးသော်ကိုတော့ ဓာတ်ပုံတောင် မမြင်ဖူးဘူး။ အေးရော…
အဲ… အမေနဲ့ မေမေဘွားဘွားတို့က ကျွန်တော့်ကို ဦးသုခ ၀င်စားတာလို့ ယုံကြည်ကြသဗျ။
ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ ကျွန်တော်လည်း မိန်းမမှုမှာ သူ့လိုပဲ ခြေစလက်စလေးတွေ မကင်းခဲ့ရှာလေပဲကိုး။ grin emoticon
သို့သော် အဘိုး တကယ် ၀င်စားတာဆိုရင်တောင်မှ ကျွန်တော့်ခမျာလေးမှာ သူ့လို အငြိမ့်လည်း မထောင်နိုင်၊ ပိုက်ဆံကလည်း မပေါရှာလေတော့ သူ့လောက် ကဲခွင့် မကြုံလိုက်ရှာပါဘူး။ အရွယ်ကောင်းမှာ ထမင်းတစ်လုပ် ဟင်းတစ်ရှုပ်အတွက် အနိုင်နိုင်လုံးပမ်းနေခဲ့ရတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်ရှာခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ (ပြောရင်း ဇာတ်က နာလာပြန်ပြီ။ မျက်ရည်တွေတောင် ဘူးသီးလုံးလောက် ကျချင်ချင်ရယ်…)
အဲတော့ သူ့လိုလည်း ၄၆ နှစ်နဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါဝေဒနာနဲ့ မတိမ်းပါးနိုင်ခဲ့ရှာဘူးပေါ့နော်။ (အဲဒါက ပို လွမ်းစရာ ကောင်းသွားတယ်။ 😛 )
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သည်ဘ၀မှာ ကျွန်တော် အကဲမရလှခြင်းသည် ဟိုဘ၀က အထုံအဆက်ကြောင့်သာ ဖြစ်တန်ရာ၏လို့ အောက်မေ့ပြီး ခွင့်လွှတ်တော်မူကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် သိပ်ကောင်းမှာပဲပေါ့နော်။ ငှဲ… ငှဲ… ဂလိုပဲ ကြံဖန် အကြောင်းပြရတာပ။
ဦးသုခရဲ့ အောက်က ဦးချစ်မောင်။
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အဘိုးအဖြစ်နဲ့ ဗွေဆော်ဦးတွေ့ဖူးတဲ့သူ ဘိုးချစ်မောင်ပေါ့။
ပထမဆုံးအချက်က သူက ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လုံးမှာ ချိုင်းထောက်နဲ့ နေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။
ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး၊ သူ့ဘယ်ဘက် ခြေထောက်ကို ဖားပြုတ် နှစ်ခါကိုက်တာကြောင့် ခြေထောက်က ခွင်သွားတယ်ဆိုပဲ။ ခြေဖျားက သာမန်ခြေဖ၀ါးတွေလို ပြင်ညီ ပြန့်ပြူးမနေဘူး။ ခွင်နေပါတယ်။ သည်အတွက် သူ့ကြိုးသိုင်းဖိနပ်ကို သူ့အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားရပါတယ်။ ဒါတောင်မှ စုံလျှောက်လို့ မရတာမို့ တစ်ချိန်လုံး ချိုင်းထောက်ကို သုံးရပါတယ်။ ပွဲတွေ လမ်းတွေဆိုရင်တော့ တုတ်ကောက်ကို အားပြုပြီး လျှောက်ပါတယ်။
ဘိုးချစ်မောင်က ရုပ်မဆိုးပေမယ့် မျက်နှာပေါက်ကတော့ အလွန်ဆိုးပါတယ်။ ကျွန်တော် လူမှန်းသိတဲ့ အချိန်မှာ သူက အရွယ်ကောင်းသေးတော့ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ လျှောက်သွားနေတတ်ပါတယ်။ အဲတော့ နေလောင်ထားတဲ့ အသားအရေညိုညို၊ အရပ် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ အဘိုးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အတော်ရှိန်စရာ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်ကသာ ရှိန်တာပါ။ သူကတော့ ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်။ သူတို့အိမ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့အိမ်က ၈၁ လမ်းပေါ်မှာ တစ်လမ်းတည်း ရှိကြတာပါ။ သုံးပြပဲ ခြားပါတယ်။ အဲတော့ သူ တစ်နေရာရာက ပြန်လာရင် ကျွန်တော့်ကို ၀င်ခေါ်၊ စက်ဘီးပေါ်တင်ပြီး သူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားတတ်ပါတယ်။
သူအဲလို ခေါ်သွားပြီဆိုရင်တော့ မေမေ့မှာ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက် ကျန်ရစ်ရပါတော့တယ်။
ဘိုးချစ်မောင်ကို ကျွန်တော်က အဘိုးလို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ မေမေနဲ့ ဦးကြီးကိုကိုကတော့ ဘဒွေးကြီး (စာလုံးပေါင်းမှန် ဘထွေးကြီး)လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
အဘိုးက သော်သော်လို့ အားလုံးက ခေါ်သလို ကျွန်တော်ကပါ သော်သော်လို့ပဲ လိုက်ခေါ်တဲ့ သူ့နှမ ကျွန်တော့် အဘွားလေး ဒေါ်သော်တာနဲ့ အတူနေတာပါ။
သော်သော်က အနာကြီးရောဂါသည်ပါ။ ရောဂါသည်မှ တော်တော့်ကို အခြေအနေဆိုးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆစ် ခြေဆစ်ကလေးတွေတောင် အပြည့်အစုံ မရှိရှာတော့ပါဘူး။
ပြီးတော့ ဦးရှမ်းရဲ့ သမီးပီပီ အိမ်နေရင် ဘော်လီနဲ့ ထဘီရင်လျားနဲ့သာ နေပါတယ်။ မန္တလေးကလည်း ပူပေတာကိုး။
အဘိုးကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့၊ မတတ်သာလို့သာ ထည့်လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီ့အိမ် (ကျွန်တော်တို့က မြောက်အိမ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တစ်လမ်းတည်း မြောက်ဘက်က အိမ်မို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကိုတော့ သူတို့ဘက်က တောင်အိမ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။) အဲ… အဲဒီ့မြောက်အိမ်ကို ပါသွားရင် မေမေ့မှာ ကျွန်တော့်ကို အနာကြီးရောဂါ ကူးလာမှာ ပူပင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ရူးမတတ် ကျန်ရစ်ရှာပါတယ်။
ကျွန်တော်က ကလေးဆိုတော့ ဘာသိမှာလဲ။ လက်သာတဲ့နောက် ပါတာပေါ့။ ပြီးတော့ အဘိုးတို့ ခြံဝင်းကြီးထဲမှာ မန်ကျည်းချိုပင်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ မန်ကျည်းသီးမှည့်တွေက အရမ်းချိုတာမို့ ကျွန်တော်က အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုက်မှန်းသိတော့ အဘိုးနဲ့ သော်သော်ကလည်း အကြွေတွေကို ကောက်ပေးထားတတ်ကြပါတယ်။
မြောက်အိမ်မှာပဲ အရှေ့အိမ်က ရှိပြန်သေးတယ်။ မြောက်အိမ်ဝင်းကြီးက အတော်ကျယ်ပါတယ်။ ၀င်းပေါက်ကနေ အဘိုးနဲ့ သော်သော်နေတဲ့ အနောက်အိမ်ကို ရောက်အောင် ခြေလှမ်း ၅၀ လောက် သွားရပါသေးတယ်။ ခြေလှမ်း ၅၀ လောက် ရောက်ရင် ၀င်းကလေး စတိခတ်ထားတဲ့ အဘိုးတို့ မောင်နှမ နေရာ နံကပ်တိုက် ရှိပါတယ်။
နံကပ်တိုက်ရဲ့ တောင်ဘက်မှာတော့ ခြုံရိုင်းတွေ ပေါက်နေတဲ့ မြေအလွတ် ပေ ၅၀ လောက် ကျန်သေးတယ်။ တိုက်ရဲ့ မြောက်ဘက်မှာတော့ ဦးရှမ်းလက်ထက်က ကားဂိုဒေါင်ဟောင်းနဲ့ သော်သော် ထမင်းချက်တဲ့ မီးဖို ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ ကားဂိုဒေါင်ရဲ့ အရှေ့ဘက်နားမှာတော့ အုတ်ကန်ပါ။ ကျုံးရေ သွယ်ထားပါတယ်။ တိုက် နောက်ဖေးကိုတော့ တစ်သက်လုံးမှ နှစ်ခါလားပဲ ရောက်ဖူးခဲ့တယ်။ အဲဒီ့မှာလည်း ခြုံရိုင်းတွေနဲ့ မြေအလွတ်က တော်တော် ကျန်ပါသေးတယ်။
၀င်းပေါက်ရဲ့ မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ ၀င်းထရံ သီးသန့်ခတ်ထားတဲ့ အရှေ့အိမ် ရှိပါတယ်။
အဲဒါက အဘိုးလေး ဦးလှမောင်တို့ မိသားစု နေတဲ့အိမ်ပါ။
ကျောဘက်သည် နောက်၊ မျက်နှာမူရာသည် ရှေ့
သူတို့က အဘိုးအိမ်ကို အနောက်အိမ်၊ အဘိုးတို့ အိမ်က သူတို့အိမ်ကို အရှေ့အိမ် အဲသလို ခေါ်ပါတယ်။ ရှေ့ နောက်ဆိုတဲ့ သဘောမဟုတ်ဘဲ အရှေ့ဘက်အရပ်မှာ ရှိတဲ့ အိမ်၊ အနောက်ဘက် အရပ်မှာ ရှိတဲ့အိမ် သဘောနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ခေါ်ပါတယ်။
သည်နေရာမှာ အရှေ့နည်းနည်းတိုးလို့ ပြောတဲ့ စကားဟာ ဗမာစကား အလွဲဆိုတာ ထည့်ပြောချင်သွားရသေးတယ်။ အရှေ့ဆိုပြီး၊ အနောက်ဆိုပြီး အ ထည့်ပြောရင် အဲဒါ အရပ်ဒေသကို ရည်ညွန်းတဲ့ အသုံးပါ။ ရှေ့နည်းတည်းတိုး၊ နောက် နည်းနည်းဆုတ် စသဖြင့် မျက်နှာမူရာနဲ့ ကျောဘက်ကို ပြောရင် အ မပါဘဲ ပြောမှ အမှန်ဆိုတာ နှောင်းလူတွေ သိပ်မသိတော့ပါဘူး။ ထားပါတော့လေ။ ဗမာစာနဲ့ ဗမာစကားက ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက် ကြိုးစား ကြိုးစား၊ မကြာခင်ပဲ ဗုံးဗုံးလဲတော့မှာမို့ သည်ကိစ္စကို အကျယ်မချဲ့ချင်တော့ပါဘူး။
အဘိုးအိမ်ကို လိုက်သွားရင် မေမေမျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းမှာ အဲဒီ့ အရှေ့အိမ်ကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
အသက်ထက် ပစ္စည်းကို မက်တဲ့အမျိုး
အရှေ့အိမ်မှာလည်း အနာကြီး ရောဂါသည် တစ်ယောက်ရှိနေလို့ပါပဲ။ အဘိုးလေး အပါအ၀င် ဦးရှမ်းက မွေးတဲ့ သားယောက်ျားလေးတွေမှာ အနာကြီး ရောဂါမဖြစ်ဘဲ သမီးတွေမှာသာ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အဘိုးလေးက မွေးတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသားမှာတော့ အဲဒီ့ရောဂါ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ သူက ဆေးမီတဲ့အတွက် သော်သော့်လောက် အခြေအနေ မဆိုးပါဘူး။
သူ့ကိုတော့ ကျွန်တော်က လေးလေးမြင့်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူ့နာမည်က (ဦး)မြင့်ကျော်ပေမယ့် မေမေအပါအ၀င် အားလုံးက သူ့ကို မောင်မြင့်လို့ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဦးလေး တစ်ဝမ်းကွဲပေါ့။
အဘိုးလေးကတော့ ဦးကြီးကိုကိုလိုပဲ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်၊ စမတ်ကျကျ၊ လူပုံချောချော၊ ဂိုက်ကောင်း၊ ဆိုက်ကောင်းပါ။ ထူးခြားတာက သူ့နဖူး ဘယ်ဘက် (ထင်တယ်) မှာ ရှည်မျောမျော အမာရွတ်တစ်ခု ရှိနေတာပါပဲ။ နောက် ကြီးမှ သိရတာက သူတို့အိမ်ကို ဓားပြ ၀င်ရာမှာ ဓားပြကို နပန်းလုံးလို့ ဓားပြဗိုလ်က “အသက်ထက် ပစ္စည်းကို မက်တဲ့အမျိုးပဲ၊ သေပေတော့”ဆိုပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်သွားတာတဲ့ ခင်ဗျ။
နဖူးကို မှန်သော်လည်း လျှပ်မှန်တာမို့ သေကံမရောက် သက်မပျောက်ဘဲ နဖူးမှာ သေရာပါ အမာရွတ်နဲ့ ဖြစ်နေတော့တာပါ။
အဲဒီ့အဘိုးလေးကိုလည်း ကျွန်တော်ကတော့ ချစ်ပါတယ်။ သူတို့အိမ်က သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်ကလေးနဲ့ အေးချမ်းတယ်။ ပြီးတော့ အနောက်အိမ်တို့၊ ကျွန်တော်တို့ တောင်အိမ်တို့နဲ့ ယှဉ်ရင် ပိုပြီးလည်း ခေတ်မီတယ်။ အဘိုးလေး မိန်းမ၊ လေးလေးမြင့်ရဲ့ အမေ ဘွားဘွားကြွယ်ကလည်း ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့မို့ ကျွန်တော်က အဲဒီ့အိမ်မှာ ပျော်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အဲဒီ့အိမ်ကို သွားသွားနေတာကို အဘိုးဦးချစ်မောင်ရော၊ ဦးကြီးကိုကိုရော၊ မေမေရော တယ်မကြိုက်လှသလို မြောက်အိမ်ကို သွားကြတိုင်းလည်း အဲဒီ့အိမ်ကို သုံးခေါက်မှ တစ်ခေါက်၊ လေးခေါက်မှ တစ်ခေါက် ၀င်တတ်ကြတာကို သတိထားမိတယ်။
အဲဒီ့အိမ်ကို သွားတာ သဘောကျတဲ့သူကတော့ သော်သော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သော်သော်က သူ့မောင်ကို အတော်ချစ်သလို သူ့တူတော်မောင် လေးလေးမြင့်ကိုလည်း အရမ်းချစ်ပါတယ်။ ကလေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တောင် သတိထားမိအောင် သော်သော်က သူ့မောင်နဲ့ သူ့တူကို ချစ်တာပါ။
နောင် အကြာကြီးကြာ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းကြီး လူလားမြောက်တော့မှ၊ မေမေ ဇာတ်ကြောင်း လှန်တော့မှ သိရတာက မေမေအပျိုပေါက်တုန်းက လိုက်ပြေးခဲ့တဲ့သူဟာ ဘွားဘွားကြွယ်ရဲ့ အမျိုးအရင်း ဖြစ်နေခဲ့မှန်း သိတော့တာပါ။ အဲဒါကြောင့် သူတို့က အရင်းအချာကြီးပေမယ့် အဲဒီ့အိမ်နဲ့ သိပ်တရင်းတနှီး မနေခဲ့ကြတာဆိုတာ သဘောပေါက်လာရပါတော့တယ်။
ကလေးတုန်းကတော့ ဘယ်သိမှာလဲဗျာ။ နားမလည်ခြင်းများစွာနဲ့ ကလေးလုပ်ရတဲ့ဘ၀ဟာ အတော် ဆိုးတယ်လို့သာ ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။
ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးတဲ့ အကျင့်
မြောက်အိမ်က ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော် ခံရပါပြီ။
မေမေက ကျွန်တော့်ကို ရေနွေးပူပူထဲ ဒက်ထော(လ်) ပိုးသတ်ဆေး သုံးလေးစက်ထည့်ပြီး ရေချိုးပေးပါတော့တယ်။ အဲဒီ့အိမ်က အနာကြီးရောဂါပိုးတွေ ပါလာခဲ့သည် ရှိသော် ပိုးသတ်ရအောင်လို့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်းများနဲ့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားတော့တာပါ။
မန္တလေးလို အင်မတန် ပူတဲ့ မြို့ကြီးမှာ နေနေပါလျက်ကနဲ့ ကလေးဘ၀ကတည်းက ရေနွေးနဲ့ တစ်ချိန်လုံး ရေချိုးနေခဲ့ရတဲ့ ထိုကျွန်တော် ရေနွေးနဲ့မှ ရေမချိုးရရင် အာသာမပြေသလို ဖြစ်တတ်တာ ကျွန်တော့် အပြစ် ဖြစ်သင့်သလားဗျာ။ ဒါပေမယ့် ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးချင်တဲ့ ကျွန်တော့်အမှုအတွက် အပြစ်တင်တော့ ခံရဖူးပါသဗျ။ အပြစ်တင်တာထက်တောင် ဆိုးပြီး အမနာပ ပြောတဲ့သူတွေတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲတုန်းက စာအုပ်မျက်နှာစာ (Facebook) မပေါ်သေးတော့ သည်လူတွေ့နှယ်လို့သာ အောက်မေ့မိခဲ့ပေမယ့် ကနေ့ စာအုပ်မျက်နှာစာပေါ်လာချိန်မှာတော့ အဲသလို ပြောခဲ့တာလောက်က ပန်းနဲ့ ပေါက်တာလောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ… ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မီးကုန် ယမ်းကုန် ဆဲနေကြ၊ ဓားကြိမ်း ကြိမ်းနေကြတဲ့သူတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးလှသော ရွှေနိုင်ငံကြီးထဲမှာ နည်းမှ မနည်းတာကိုး။
လူတွေမှာ သူ့နောက်ခံ၊ သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့က ထည့်တွက် ငဲ့ကွက်ကြမယ့် အစား ကိုယ့်သဘောထားနဲ့ မကိုက်ညီတိုင်း၊ တစ်နည်းဆိုရရင် ကိုယ် နားလည်မပေးနိုင်တိုင်း တောင်ပြော မြောက်ပြော လျှောက်ပြောခြင်းဟာ လူလူချင်း လေးစားရာ ရောက်တယ်၊ မရောက်ဘူးဆိုတာ ဆင်ခြင်ကြည့်နိုင်မယ့် သာဓကငယ်လေးပါပဲ။
အဘိုးဦးချစ်မောင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာ နောက်တစ်ချက်က အဘိုးမိန်းမပါ။ ဒေါ်တင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဒေါ်တင်လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ အနေအေးအေးနဲ့ ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးပဲလို့ မှတ်မိနေပါတယ်။ နောက်ကျတော့ အဲဒီ့ ဒေါ်တင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိဘူး။ အဘိုးတို့ အိမ်မှာလည်း မရှိတော့ဘူး။
ကျွန်တော် နည်းနည်းလေး အရွယ်ရောက်မှ အဖေနဲ့ အမေတို့နဲ့ မန္တလေးကို ပြန်ရောက်ပြီး ဒေါ်တင်ကို အဖေတို့ အမေတို့ကပဲ စုံစမ်းကာ သွားတွေ့ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ မန္တလေးတောင် ခြေရင်းက ဆိုင်တန်းလေးမှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ နေခဲ့တဲ့ ဒေါ်တင်ကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို တွေ့တော့ ငိုရှာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကလေးတစ်ယောက် နားမလည်ခြင်းထဲမှာ အဲဒါလည်း ပါခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
နောက်မှ သိရတာက ဒေါ်တင်က သူ့နှမ သော်သော်နဲ့ အဆင်မပြေတာကြောင့် အဘိုးက ကန်ထုတ်လိုက်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ အဘိုး နောက်ထပ် အိမ်ထောင် မပြုတော့တာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အထိပါပဲ။
ကျွန်တော် မှတ်မိတာ တစ်ခုကျန်သေးတယ်။ အဲဒါက အဘိုးတို့အိမ်မှာ ဆန်ရောင်းသေးတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဆန်ကို တရားဝင် ရောင်းသေးတယ်ဆိုတော့ တော်လှန်ရေး ကောင်စီ မတက်ခင် အချိန်ပေါ့ဗျာ။ တော်လှန်ရေး ကောင်စီတက်တော့ အဲသလို ဆန်ရောင်းတာကို ထ ကန့်သတ်လိုက်တာများ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ ဆန်ရှားရာကနေ လူတွေ ငတ်မလိုဖြစ်တော့ တရုတ် အရေးအခင်းကို ဖန်တီးပြီး လမ်းလွှဲပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီ့ တော်လှန်ရေး ကောင်စီခေတ်မှာ တစ်ရပ်တစ်ကျေးက ကိုယ့်သားမြေးအတွက် ဆန်လေး နှစ်ပြည်လောက် သယ်မိတာနဲ့ ထောင်ကျတဲ့သူတွေတောင် ရှိခဲ့ဖူးသေးပါရော။
ဆန်ရောင်းတယ်ဆိုမှ အမေနဲ့ ညီအစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲတွေဖြစ်တဲ့ ကြီးကြီးမေ၊ ကြီးကြီးဦး၊ ကြီးကြီးရီတို့ဟာလည်း ဈေးချို အေရုံ ဆန်တန်းမှာ ဆန်ရောင်းခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့က မေမေဘွားဘွားရဲ့အစ်ကိုက မွေးတာတွေပါ။ ဦးလှဖေ၊ ဒေါ်လှမေ၊ ဒေါ်လှဦး၊ ဦးထွမ်အိမ်၊ ဒေါ်ရီရီတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့က အဲတုန်းက ကျောက်သွေးတန်းလို့ ခေါ်တဲ့ ၈၄ လမ်းမကြီးပေါ်၊ အခု ထွန်းဦးစာပေရဲ့ တောင်ဘက်နှစ်အိမ်ကျော်လောက်ဆီက တိုက်တန်းပေါ်မှာ နေကြတာပါ။
မီးခြစ်ဘူးလို အခန်းလေးတွေထဲက အမျိုးတွေ
အဲဒီ့တိုက်တန်းက အလယ်မှာ လေဟာပြင် လူသွားလမ်း၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ အိပ်ခန်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အနောက်ဘက်က မျက်နှာစာဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်က နောက်ဖေးခြမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ အရှေ့ဘက်ခြမ်းက အခန်း လေးခန်းကို ယူထားကြပြီး သူတို့ မောင်နှမတစ်တွေ ခွဲဝေ အိပ်ကြပါတယ်။ အနောက်ဘက်ခြမ်းက အခန်း နှစ်ခန်းကိုလည်း ယူထားပြီး မီးဖိုချောင်တွေ လုပ်ထားပါတယ်။
တောင်ဘက်ထိပ် အခန်းကို ဦးထွမ်အိမ်က ယူပါတယ်။ ပကတိ တရုတ်မျက်နှာနဲ့ လူကြီးပါ။ သို့သော် ခေတော့ မခေဘူးခင်ဗျ။ သူက မန္တလေးမြို့တော်ဝန်တောင် လုပ်ခဲ့ဖူးသေးဆိုပဲ။ သွားစိုက်ဆရာလည်း လုပ်ပါတယ်။ သူ့ သွားစိုက်ဆိုင်က အဲဒီ့တိုက်တန်းနဲ့ မျက်စောင်းထိုးမှာ ရှိပါတယ်။ သူ့ပထမအိမ်ထောင်ကွယ်လွန်သွားတော့ နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ နေပါတယ်။ နောက်အိမ်ထောင်ကို ကျွန်တော်က ကြီးကြီးစောလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း အသားဖြူဖြူ ဒေါင်းတိ မောင်းတိတိ ရှမ်းလိုလို တရုတ်လိုလို မျက်နှာတည်တည်နဲ့ အမျိုးသမီးကြီးပါ။
ပထမအိမ်ထောင်နဲ့က သားတစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက် ထွန်းကားပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ မောင်နှမ နှစ်ဝမ်းကွဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီ့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကို ကြီးကြီးမေတို့က တာဝန်ယူလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးစပ်ရင်သာ ကျွန်တော်နဲ့ မောင်နှမတော်တယ်၊ အသက်အရွယ်ချင်းကျ နှစ်ဆယ်ကျော် ကွာကြပါတယ်။
သူတို့မောင်နှမကို ကိုကိုကျော်ညွန့်ရယ်၊ မမသန်းရယ်လို့ ကျွန်တော်က ခေါ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ဦးထွမ်အိမ်နဲ့ တော်တော် ရုပ်ချင်းတူပါတယ်။ ကိုကိုကျော်ညွန့်က သာတောင် တူပါသေးတယ်။ သူကလည်း တစ်ဇာတ်လမ်းခင်ဗျ။ အဲဒါကို နောက်တော့ ပြောပြပါ့မယ်။
ဦးထွမ်အိမ်နဲ့ ကပ်လျက်အခန်းမှာက ကြီးကြီးဦးနဲ့ ကိုကိုကျော်ညွန့်တို့ နေကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခန်းမှာကျတော့ ကြီးကြီးမေ၊ ကြီးကြီးရီနဲ့ မမသန်းတို့ နေကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး တစ်ခန်းမှာတော့ ဦးလှဖေနဲ့ သူ့သမီး မမလှလှတို့ နေပါတယ်။ မမလှလှကလည်း မမသန်းလို ကျွန်တော်နဲ့ မောင်နမ နှစ်ဝမ်းကွဲပါ။ သူ့ကို သူ့ထက် ငယ်တဲ့သူအားလုံးက မမလှလို့ ခေါ်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သူ့နာမည် အပြည့်အစုံအတိုင်း မမလှလှလို့ပဲ ခေါ်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်မှန်း မသိပါဘူး။
အဲဒီ့ မမလှလှရဲ့ အဖေ ဦးလှဖေ၊ ကျွန်တော့်အခေါ် ဦးကြီးလှဖေက ခေသူ မဟုတ်ဗျ။ အဲဒီ့ခေတ် မန္တလေး ရုပ်ရှင်ရဲ့ ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာ ဖြတ်လျှောက်လောက်ကတော့ ကားတိုင်းလိုလိုမှာ ပါခဲ့ပါသေးလားဗျား။
ရှပ်အင်္ကျီကို အမြဲတစေ ပုဆိုးအပြင် ထုတ်ဝတ်ပြီး ခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာပေးနဲ့ အသားဖြူဖြူ မျက်လုံးပြူးပြူး အရပ်မြင့်မြင့် ဦးကြီးလှဖေဟာ အရပ်ပုပု ဂင်တိုတို မျက်စိပေါက် မှေးမှေး ဦးကြီးထွမ်အိမ်နဲ့က ဘုရားစူး ညီအစ်ကိုပါပဲ။ ကျွန်တော်နဲ့က ဦးကြီးလှဖေနဲ့ ပိုနီးစပ်ပါသေးတယ်။
ဦးကြီးထွမ်အိမ်ကိုကျတော့ မောင်နှမချင်းတောင် ခပ်ရှောင်ရှောင်ရယ်။ ဦးကြီးထွမ်အိမ်က စိတ်ပဲ နောက်နေသလိုလို၊ မထင်ရင် စိတ်ပဲ ထဖောက်တတ်သလိုလို ပြောသံကြားဖူးတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပဲ သိပါလိမ့်မယ်။
Thu Ma အားလုံးပြီးရင်စာအုပ်ထုတ်ပါ ဦးရေ…
Saw Zar Li ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ Family tree ဆွဲကြည့်နေရတယ်… ဒါတောင် မေ့မေ့သွားလို့ အပေါ်ပြန်တက်ပြီး အမျိုးစပ်ရတာ ခဏခဏပဲ
Thu Ma သမီးက ဘွားညိုကို သတိရသွားတယ်။ ဘွားညိုကမျက်စိမှုန်တော့ သမီးက စာဖတ်ဖတ်ပြရတယ်။ သမီးကို အဘွားက စာတော်ဖတ်တဲ့ သူကမိဘုရားကြီးပေါ့ 🙂 သမီး စာဖတ်တာ တော်သတဲ့။ အဲဒါကြောင့် တစ်တန်းလောက်မှာတင် သတင်းစာကို ကောင်းကောင်းဖတ်တတ်နေပြီ။ ဘွားညိုကျေးဇူး 🙂
Nge Thar စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်အောင် ထုတ်နော် ဆြာ စာအုပ်နဲ့မှ ဇာတ်ရည်လည်အောင် အပီအပြင် ဖတ်ရမယ် ခုတော့ ဆန့်တငင်ငင်ရယ်
ATK စက္ကူဖိုးရယ်၊ ပုံနှိပ်ခရယ်အတွက် ပိုက်ဆံလေး စုထားလေ။ ပြီးရင် အရပ်တကာ လည်ပြီး ခများကိုယ်တိုင် လိုက်ဝေ။ အလကားပေးတောင် ယူမယ့်သူ ရှိမှာ မဟုတ်တော့တဲ့ ခေတ်ဗျ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်စာအုပ်လို စာအုပ်မျိုးမှ ရောင်းကောင်းတာ။ ကျွန်တော့်လိုကောင် ရေးတာများတော့ အဖက်လုပ် ဖတ်မယ့်သူက သည်တိုင်းပြည်ကြီးမှာ တစ်ထောင်ရှိ ကံကောင်း။
Nge Thar တကယ်မူပိုင်ခွင့်ပေးမလား ဆရာ
Zabe Lwïn shi par dae shint!
Kay Zac ဘဘဦးလှဖေကသမီးကိုသိပ်ချစ်တာ။ နေ့လည် မုန့်စားဆင်းချိန်ဆိုရင် ကျောင်းထိလိုက်လာပြီး မုန့်တွေ လာလာပို့တာ။ တအားလည်း အလိုလိုက်တယ်၊ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါရမယ်ဆိုရင် သေချာ ပြင်ဆင်ပြီးမှ သွားတာ။ ခေါင်းပေါင်းလေး တစ်လူလူနဲ့။ ကြီးကြီးလှ ဆုံးတော့ သမီးမရှိဘူး။
ATK အွင်… ဦးကြီးလှဖေ မဆုံးခင် ညည်းကို မွေးတာလား။ ကျုပ်က ညည်းတောင် မမှီလိုက်ဘူး မှတ်လို့။ နုချက်အေ။ ညည်းအမေကို ဒါတွေ ပြနေသေးလား။ သူဖတ်ရင် ဘာပြောမလဲ မသိဘူး။
Kay Zac လုဂျီးဒေ အိမ်မှာ မရှဝူးဂျ။ ကလေးဒေပဲ အုပ်ချုပ်နေဒယ် ဟဲဟဲ။ မှီဒါပေါ့စ်၊ ဦးလှဖေရဲ့အသည်းကျော်က သများလေ အတူမရှိ အတုမရှိဘဲ။
သမီးငယ်ငယ်လေးမှာ ဆုံးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကို သိပ်ချစ် သိပ်အလိုလိုက်တဲ့လူဆိုတော့ အခုထိ မှတ်မိနေတယ်။
Soe Myat Myo Shwe စာလုံးပေါင်း အမှန်မေးချင်လို့ပါဆရာ… စာသိပ်ဖတ်တယ်လို့ မဟုတ်ဘူးလားလို့။ ပ သတ်နဲ့ပဲ အမြဲ မှတ်ထားမိသလိုဖြစ်နေတော့ သမီး အမှတ်မှားနေတာလား သိချင်ပါတယ်။
ATK ကျေးဇူးပါဗျာ။ သမီး မှန်ပါတယ်။ ဆရာမှားပါတယ်။ ပြင်လိုက်ပါ့မယ်။ သိပ်က အမှန်ပါဗျာ။ ၀ဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ် အမေထွား Myint ရေ… (ဟေ့… ဘာရယ်တာလဲကွ) 🙂 Kay Ma… ဒါဆို သူပါတဲ့ ဓာတ်ရှင်တွေရော ကြည့်ဖူးလိုက်သေးလား။ မေမေဘွားဘွား၊ ဦးကြီးကိုကိုလို့ ရေးတဲ့အခါ လေးလေးတင်တင်လည်း တစ်နေရာမှာတော့ ပါရဦးမှာ။ ခက်တာက ဆွေမျိုးလည်း စပ်လို့ မရဘူး။ ညည်းပါ ပြန်ပါလာတော့မယ့် သဘောတော့ ရှိတယ်။ ခေါင်းစဉ်တောင် စဉ်းစားပြီးနေပြီ။ ခိုဒေါင် ခိုင်ဇင်မဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့။ မနိပ်လားးးးး 😛
Author lettwebawPosted on3March 2015 30 March 2015 Categories MemoirsLeaveacomment on အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၂